Iidolophu ezintle zaseToledo: Ukusuka e-Escalona ukuya eLa Puebla de Montalbán | Uhambo lweNdaba
Iidolophu ezintle zaseToledo
ULuis Martinez | 13/05/2022 15:00 | Ukhenketho lwezendalo, España
Ukuba siqwalasela uhambo nge iidolophu ezintle zaseToledo, kuya kufuneka senze ukhetho kuba zininzi. Eli phondo laseCastilian laseLa Mancha linelungelo elikhethekileyo elilawulwa yi IMontes de Toledo kunye Imilambo yaseTagus neTiétar, ephela ikhokelela kwelokuqala.
Kodwa, ngaphezu kwako konke, ithafa laseToledo lineedolophu ezintle ezizaliswe yimbali namatye ezikhumbuzo. Ngokunjalo, inemihlaba eneengcambu ezinzulu zoncwadi, ekubeni ungalibali ukuba okungenakulinganiswa Don Quixote waphila ezininzi kwiziganeko zakhe kula mazwe. Konke oku kumisela iphondo omele ulazi kakuhle. Ukuze ube nesikhokelo, siza kukubonisa ukhetho lwethu lweedolophu ezintle ze Toledo.
1 ILa Puebla de Montalbán
2 Orgaz, enye yeedolophu ezintle zaseToledo
3 Ocaña kunye noSodolophu wayo omhle wePlaza
5 Escalona, ​​ngaselunxwemeni lweAlberche
ILa Puebla de Montalbán
Plaza Usodolophu waseLa Puebla de Montalbán
Ukuba sithetha ngeeresonances zoncwadi, le dolophu yayiyindawo yokuzalwa UFernando de RojasUmbhali we Celestine. Yeyakhe Ummandla waseTorrijos, phantse kumbindi welo phondo, ukusa kwintlambo echumileyo yeTagus.
Kodwa iLa Puebla ibalasele ngelifa layo elikhulu lesikhumbuzo. Njengeziko lemithambo-luvo yi Isikwere esikhulu, ngokwesiqhelo iCastilian, apho unokubona khona i Icawa yoMama wethu woXolo, eyiGothic yenguqu ukuya kwiRenaissance. Uya kufumana kwakhona kwisikwere isakhiwo seHolo yeDolophu kunye ne Ibhotwe lamaBalo eMontalbán, ulwakhiwo olumangalisayo lweRenaissance kunye nePlateresque touches.
Sikwacebisa ukuba undwendwele kule dolophu i-hermitages yaseNuestra Señora de la Soledad kunye ne-Santísimo Cristo de la Caridad, eyokuqala ibe yi-baroque kunye neyesibini ye-classical; oonongendi baseFrancisca kunye noonongendi beConceptionist kunye ne Inqaba kaMichael, ukuphumla kwecawa endala, engomnye wemifuziselo yedolophu.
Kodwa kufuneka kwakhona undwendwele, ngokuchanekileyo, i Celestine Museum ukuqonda ngcono umbhali kunye nomxholo wentlalo yalo msebenzi omkhulu weeleta zethu. Kwakhona, ukushiya iLa Puebla, unayo Tagus Bridge, eyaqala ngenkulungwane ye-XNUMX, yaye, malunga neekhilomitha ezisibhozo ukusuka apho, uya kuyibona inomtsalane IiCanyon zaseBurujon, izinto ezenziwe ngodongwe ezingenamsebenzi eziya kukukhumbuza ngeGrand Canyon yaseColorado.
Orgaz, enye yeedolophu ezintle zaseToledo
ICastillo de Orgaz, enye yezona lali zintle eToledo
Ifumaneka emazantsi eSierra de Yébenes nakwindawo Ummandla weSisla Uya kuyifumana le dolophu intle sikwayiquka kwiidolophu ezintle zaseToledo ngenxa yelifa layo elimangalisayo.
Ukuqala ukhenketho lwakho lwe-Orgaz, ungandwendwela i Isikwere esikhulu, kodwa kunye icawa yaseSanto Tomás Apostol, eyakhiwe ngu Alberto de Churriguerra ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo, kwaye Inqaba ye-Orgas, eyaqala ngeXIV kwaye yenye yeempawu zedolophu. Uya kuchukunyiswa yinqaba yebhotwe, eneemitha ezimashumi mabini ukuphakama.
Kukwakho iintsalela zodonga oludala e-Orgaz kunye namasango amabini kumane awela kuwo: i Iingqameko zaseBelén naseSan José. Ngokunjalo, idolophu ineebhulorho zembali ezininzi, phakathi kwazo enye yazo amehlo amahlanu, zakhiwe ngamaxesha ka UCarlos III, kunye neendawo ezininzi zokuhlala ezifana nezo ze-El Socorro kunye neLa Concepción.
Kwelinye icala, inani elikhulu amakhaya amahle ezihlala izitrato zayo. Ngokomzekelo, siya kukhankanya izindlu ze-Count Tierrapilares, iCalderón de la Barca, i-Ioseph okanye iVizcaíno. Kwaye, ekugqibeleni, i-Orgaz kunye neendawo eziyingqongileyo zibalaseleyo ngexabiso labo elikhulu lezinto zakudala.
Njengomzekelo woku, iikhilomitha ezintlanu ukusuka edolophini sisithili Arisgotas, apho uya kufumana umdla Visigoth Art Museum. Ngokukwanjalo, kwinduli yeLa Tocha unokubona ii-menhirs ezimbini ezibuyela emva kwiminyaka elishumi elinesihlanu, kwi Torrejon kukho i-necropolis yaseRoma kwaye ngaphakathi Villaverde unokufumana iintsalela zebhulorho kunye nendlela ukusuka kwixesha elifanayo.
Ocaña kunye noSodolophu wayo omhle wePlaza
Usodolophu wePlaza omangalisayo waseOcaña
Le enye idolophu emangalisayo ikumntla-mpuma wephondo laseToledo, emdeni Aranjuez, njengoko uyazi, sele ingowaseMadrid. Omnye wemifuziselo yayo kukubaluleka kwayo Isikwere esikhulu, eyakhiwe ngenkulungwane ye-2002 kunye nenkangeleko ye-baroque. Ukususela kwi-XNUMX, ngaphezu koko, inomdla wenkcubeko.
Sikwacebisa ukuba undwendwele e-Ocaña UMthombo Omkhulu, isacholo seRenaissance ngu UJuan de Herrera ngo-1578, kwaye I-Cardenas Palace, ukusuka kwixesha elifanayo, kodwa yakhiwe ngokulandela i-canons ye-Gothic, nangona kwinguqu kwi-Renaissance. Ngokulinganayo lwangoku yi Lope de Vega Theatre, owayesakuba yiKholeji yoMbutho kaYesu.
Kwelinye icala, akukho kunqongophala kwamatye ezikhumbuzo azukileyo onqulo eOcaña. I Icawa yaseSanta María de la Asunción Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwisitayile se-neoclassical kwiintsalela zangaphambili, eyathi yona yakhiwa kwi-mosque endala. I Icawa yaseSan Juan Bautista indala, kuba yabhalwa kwi-XIII, nangona iye yahlaziywa kamva. Nangona kunjalo, ifakwe kwi-Mudejar art yaseToledo.
La inqaba yentsimbi yecawa yaseSan Martin Kuphela kwento eseleyo koku kwaye ibhengezwe umdla wenkcubeko. Yakhiwe ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, ikwisitayile saseHerrerian. Ngokukwanjalo, iOcaña ikubonelela ngezakhiwo ezintle zeconvental. Phakathi kwezi, ezo zaseSanto Domingo de Guzmán kunye neSanta Catalina de Siena, zombini isimbo seRenaissance. Kwaye, sele ungaphandle, uya kufumana uMthombo oMdala, mhlawumbi ukususela kumaxesha amaRoma.
Ekugqibeleni, i-Ocaña nayo ineengcambu zoncwadi. UDon wafela elalini URodrigo Manrique, awayinikela kuye unyana wakhe ICoplas ekufeni kukayise. Kwaye kwakhona kule dolophu kumiselwe umsebenzi odumileyo we ILope de Vega UPeribáñez kunye noMlawuli we-Ocaña. Ngokungathi oko akwanelanga, wazalelwa apho Alonso de ErcillaUmbhali we IAraucana.
INdlu yeeNqaba, eTembleque
Ime kwimpuma yephondo laseToledo kwaye malunga neekhilomitha ezingamashumi amahlanu anesihlanu ukusuka kwikomkhulu layo. Ikwakunika okumangalisayo Isikwere esikhulu ngokuqhelekileyo ukusuka eLa Mancha. Ngeplani yomgangatho wesikwere, inee-porticoes ezixhaswe ngamakholomu kunye neecorridors kwindawo yayo ephezulu. Eyakhiwe phakathi kwe-XNUMX kunye ne-XNUMXth inkulungwane, ineempawu ze-baroque kunye nokuhlobisa okuxabisekileyo kwamaplanga. Ngokuphathelele oku, ukufikelela okuphambili kuvelele, kugutyungelwe yi-cantilever enombono onqamlekileyo.
Kwakhona iBaroque ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX. indlu yeenqaba, esele ibhengezwe njengesikhumbuzo sobugcisa bembali kwaye igqame kwi-façade yayo entle. Kwaye ukusuka kwixesha elifanayo yile yePostas okanye I-Old Barracks, nangona kunzima ngakumbi.
Kwelinye icala, esona sikhumbuzo senkolo sibalulekileyo onokuthi usifumane eTembleque siso Icawa yoMama wethu woNyuko. Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye ineempawu zenguqu ukusuka kwiGothic ukuya kwiRenaissance. Ngaphandle, ibalasele ngenqaba yayo entle, kwaye, ngokumalunga nengaphakathi layo, inezindlu ezininzi zecawa, phakathi kwazo ezo zikaJesús Nazareno kunye neVirgen del Rosario zibalaseleyo.
Ilifa lenkolo ledolophu yaseToledo ligqitywe ngamafama aseLa Purísima Concepción, eCristo del Valle, eLoreto naseSan Antón. Kodwa ngakumbi umdla enye isuka eVeracruz ngenxa yokumila kwayo octagonal ephela kwidome.
Escalona, ​​ngaselunxwemeni lweAlberche
UCastillo de Escalona, ​​​​enye yeedolophu ezintle zaseToledo
Ikwayiyo, njengeLa Puebla de Montalban, kwi Ummandla waseTorrijos, nangona kule meko kunxweme lomlambo i-Alberche. Kumele ukuba yayimiwe ukusukela kumaxesha amandulo, njengoko iintsalela zeCeltic, zamaRoma kunye neVisigoth zifunyenwe kule ndawo. KwamaXesha Aphakathi, yayibaluleke kakhulu ngenxa yendawo yayo yobuchule.
Enyanisweni, uphawu olukhulu lwe-Escalona lulo inqaba-ibhotwe, efumana eli gama ngenxa yokuba iqulethe inqaba ngokwayo kunye nebhotwe laseMudejar. Ubukho bayo bubhalwe ngenkulungwane ye-XNUMX, nangona kukholelwa ukuba yayiyinqaba yaseRoma kuqala. Kwelinye icala, ukuqhubela phambili nee-resonances zoncwadi ebesikucacisela zona kwaye njenge-anecdote, siya kukuxelela ukuba kwinqaba. Umntwana uDon Juan Manuel, umbhali wamaxesha aphakathi owasinika ilifa Bala uLucanor.
Kuya kufuneka ubone kwakhona kwindawo isango le san miguel, apho kukho inqaba. Ecaleni eya eSaint Vincent, zezo zigcinwe eludongeni oludala. Eyona cawa ibalulekileyo e-Escalona ikwangcwaliselwe eSan Miguel Arcángel, eyakhiwe kwitempile yamandulo yaseRoma. Ngaphakathi ungabona isibingelelo esihle se-baroque. Ngokunjalo, ilifa lenkolo ledolophu ligqityezelwa yi Ikhonsathi yeeConfuciscan Conceptionists. Kodwa i-Escalona ikwabonelela ngesikwere esiqhelekileyo saseCastilian. Yi UDon Juan Manuel's, apho kukho i indlu yebhunga, namhlanje iThala leencwadi likaMasipala elinemyuziyam encinci, kunye ne-bandstand entle.
Kwelinye icala, u-Escalona uyayazi indlela yokuzivuselela njengendawo yobugcisa basezidolophini ukutsala ukhenketho. Kwizitrato zayo unokubona iisampuli ezininzi zomsebenzi wegcisa lesitrato Mnu.Stroke. Kwaye, ekugqibeleni, ukuba undwendwela idolophu ehlotyeni kwaye uzive ngathi ufuna ukuhlamba, unayo unxweme lomlambo kumanxweme omlambo iAlberche. Ukusuka kuyo, uya kubona kwakhona ibhulorho entle ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX.
Ukuqukumbela, sikubonise ezinye iidolophu ezintle zaseToledo. Kodwa sinokukuxelela ngamanye amaninzi, ekubeni eli phondo linexabiso ngokwenene. Njengomzekelo, siya kukucaphula I-Oropesa, neenqaba zayo ezimbini neNqaba yayo yeClock entle; iinto zokuzilungisa, kunye neSango leCaliphate yayo kunye neNqaba yayo yaseLa Vela; IToboso, ilizwe leDulcinea engenantanga; Ukutya, enemizila yomoya yaseLa Mancha, okanye kakhulu UTorrijos, kunye necawa yayo enomtsalane yeSantísimo Sacramento. Ngaba akucingi ukuba zizizathu ezaneleyo zokutyelela zonke ezi dolophu zintle zaseToledo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Iidolophu ezintle zaseToledo
Izikhumbuzo ezibalulekileyo zaseSpain
Yintoni onokuyibona eSeville ngosuku olunye